Isimo sezulu eSochi April 2017 - ekuqaleni, ekupheleni kwenyanga - isibikezelo esivela kwi-Hydrometeorological Center, ukushisa kwamanzi
Isimo Sezulu eSochi ngo-Ephreli 2017- Isibikezelo esivela kwi-Hydrometeorological Center
Ukuqhuba ngcono impilo impilo yomndeni wonke eSochi akunakwenzeka kuphela ehlobo, kodwa futhi entwasahlobo. Umoya omusha, umoya ophumuzayo ukuvumela ukuba usebenzise kahle futhi uzuze amandla. Kodwa ngaphambi kokwenza uhambo, isimo sezulu eSochi ngo-Ephreli 2017 kufanele sifundwe, okwenza kube lula ukuqiniseka ukuthi isikhathi esivunyelwe uhambo siyini. Ngaphezu kwalokho, kufanele ubheke isimo sezulu esilungile kunazo zonke kusukela ku-Hydrometcenter ekuqaleni, ekupheleni kwenyanga. Idatha lokushisa kwamanzi izosiza futhi: lolu lwazi luzokuvumela ukuthi ulungele kahle ukuhamba ngezinyawo.
Isibikezelo sezulu esifanele soSochi ngo-Ephreli 2017 kusuka kwi-Hydrometeorological Center
Ngokwezibalo zokuqala ezivela kwi-Hydrometeorological Center eSochi ngo-Okthoba, kuyoba nokushisa kancane kancane emoyeni. Kodwa ngesikhathi esifanayo "izivakashi" ezingapheli ziyoba yimvula. Bangakwazi ukugcina usuku olulodwa, bese bephela ngemuva kwamahora ambalwa. Ngokuvamile, isimo sezulu eSochi ngo-Ephreli, ngokusho kwesibikezelo se-Hydrometeorological Center, ngeke sishintshe okuningi futhi sizovumela izivakashi ukuba zivakashele le ndawo ngezintuthuko.
Isimo sezulu esinqunyiwe seSochi ngo-Ephreli 2017 kusukela enkonzweni ye-Hydrometeorological Center
Ngenyanga yonke izinga lokushisa kufanele likhuphuke ukusuka ku- +8 kuya ku- +17 degrees. Ukungafani okuncane kuzoba khona, kodwa ngeke kuthiwe kuyisihluthulelo. Ilinde izivakashi nomoya ophansi wendawo. Ngakho-ke, isimo sezulu esifudumele eSochi ngo-Ephreli 2017 ngeke siphazamise ukuzijabulisa kwangaphandle.
Isibikezelo sezulu nesilinganiso sokushisa kwamanzi eSochi ngo-Ephreli 2017
Kuyoba mnandi eSochi ngo-Ephreli, nesimo sezulu, nokushisa kwamanzi. Ngokwesilinganiso, lizoqhubeka lizungeze + ama-10 degrees. Ngesikhathi sezulu, izinga lokushisa lingahle liyeke ku-+8 degrees. Ngezinsuku ezifudumele kungafudumala kufika ku-+15 degrees.
Ukushisa kwamanzi cishe eSochi ngo-Ephreli 2017
Ukunciphisa izinga lokushisa kwamanzi nakho kulindeleke ebusuku. Phakathi nalezi zikhathi, isimo sezulu, amanzi eSochi ngo-Ephreli ngeke avumele ukuhamba kahle kusihlwa / ukuhamba ekuseni. Ikakhulukazi, umoya opholile uzokudala izimo ezingenakulungiswa zokululama.
Isibikezelo sezulu esinembile kakhulu ngo-Ephreli 2017 soSochi - ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga
Ngokwezibikezelo, isimo sezulu eSochi ekuqaleni kuka-Ephreli siphelele ukuzilibazisa. Umoya uzofudumala kufika ku -12 degrees, okuzojabulisa kakhulu abalandeli bokushisa. Kodwa izofaka ngokugcwele amalungelo awo ngenyanga yesibili yentwasahlobo eduze neyeshumi leminyaka: isimo sezulu eSochi ngasekupheleni kuka-Ephreli sizofudumala ngempela.
Isibikezelo sezulu sokuqala nokuphela kuka-Ephreli 2017 eSochi
Ukuphela kwenyanga kuzohlangana nezakhamizi nezivakashi ngezinsuku ezishisayo. I-Cloudiness ngeke ibe yinto ebalulekile. Isibikezelo sezulu esifanele soSochi ngo-Ephreli 2017 sithatha ukwehla kwamaningi ezinsuku zemvula engxenyeni yesibili yenyanga. Ngemuva kokutadisha izibikezelo ezinembile kunazo zonke zezulu ekuqaleni nasekupheleni kuka-Ephreli 2017 eSochi, ungakwazi ukuhlela ngokuphepha ukuya e-resort kanye nezihlobo zakho. Ngokwezibikezelo ze-Hydrometeorological Center, ukushisa kuzogcinwa kulo lonke inyanga. Ngesikhathi esifanayo, izinga lokushisa kwamanzi liyoba phezulu, kanti umswakama uphansi. Isimo sezulu esifudumele eSochi Aprili sizosizwa ngamaphuzu amancane, kepha akufanele besabe: naphezu kwemvula, umoya uzoshisa futhi ngeke kube nezinkinga ekuqhubeni ukuhamba.
Inkondlo yeNkomo Yonyaka Omusha, izifiso
Indlela yokuthola amandla emva kosuku lokusebenza
Indlela yokuchitha iholidi elikhuthele eMoscow?
Ikhekhe "I-Milk girl"
Izicathulo eziphathekayo zika-2014: izitayela zangempela, imibala, ukuhlobisa
I-Snack esuka ku-cod isibindi
Isaladi le-Spring ne-saumon
Iresiphi ye-Shepard Pie enomnandi
Izingoma zoNyaka Omusha 2017 ngamazwi namavidiyo: "USanta Claus", "Isihlahla sikaKhisimusi, amabhola, abaculi" nabanye. Izingoma zanamuhla zesiRashiya nezesiNgisi ezithandekayo mayelana noNyaka Omusha wezingane nabasha esikoleni nasenkulisa
Ukwenza izimbali neziqephu zezimbali
Amavithamini kwabesifazane abanesikhumba esomile
I-pasta ene-ricotta ne-tarragon
Indlela yokukhetha umyeni omuhle
Indlela yokukhetha i-carpet efanele ku-nursery
Indlela yokusinda isehlukaniso: amathiphu ayishumi kwengqondo kwengqondo ukuze uhlukanise kalula nomuntu
Umshado omuhle kakhulu emhlabeni